Nepal: Fandriampahalemana Anatin’ny Limby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2018 19:29 GMT
Manana ity lahatsoratra ity ny United We Blog: Vaovao Farany momba ny Fizotran'ny Fandriampahalemana: Ny Fandrosoan'ny Pôlitika Ankehitriny:
Manana rakipeon'ny resadresaka nataony tamin'ny lehiben'ny Maoista, Baburam Bhattarai, i Samudaya.
Samy nasiaka tamin'ny roa tonta ny Democracy For Nepal, fa indrindra tamin'ny firaisan'ny antoko fito noho ny tsy fahazavan-tsainy: Pramukh Dar, Aza Mitaraikiraiky: Tsy Toejavatra Momba Izay Iray Nisy Voalohany Teo amin'ny Akoho sy ny Atody ity, Parlemanta Vonjimaika: Ohatra ny Mety ny 300. Votatitra anatin'izany ihany koa ny tamin'ny naha-tany New York ny lefitry ny Praiminisitra, KP Oli: Ilay Tranga KP Oli. Misy rakitsary lava be mihitsy.
Manana lahatsoratra avy amin'i Bindu Chaudhary ny Madhesi: United We Stand momba ny iray amin'ireo vondrona atao anjorombala indrindra ao amin'ny firenena, ny Madhesi: Fanavakavahana: Mandra-pahoviana?
Manana fibedesana tsy fahita firy ho an'ny mpanjaka i Blogdai: Eh ry Mpanjaka! Nosimbanao ilay izy!